Turkiga oo Soomaliya soo gaarsiiyay raashiin gar gaar ah. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Turkiga oo Soomaliya soo gaarsiiyay raashiin gar gaar ah.
Turkiga oo Soomaliya soo gaarsiiyay raashiin gar gaar ah.
Dowladda Turkiga ayaa raashiin deeq ah soo gaarsiisay dalka Soomaaliya, kaasi oo gaaraya 8,500 oo tan oo isugu jira Bur, Qamadi, Saliid iyo Sonkor.
Raashiinkan ayaa la sheegay in markii hore dowladda Soomaaliya gacanta loo galiyay, ayadoo markii dambena la sheegay in la gaarsiiyay dhammaan maamul gobaleedyada ka jira dalka, gaar ahaan Soomaaliland iyo Puntland oo ay ka taagan yihiin xaalado abaareed.
Masuul ka tirsan Hay’adda Al-manhal oo xiriir la leh hay’adaha Turkiga ayaa Xaqiiqatimes u sheegay in raashiinkan uu ahaa mid dowladda Turkiga ay ugu tala-gashay in lagu taageero dadka ay abaaruhu ku haystaan gobalada dalka Soomaaliya.
Magaalada Moqdisho oo qura ayaa la sheegay in la soo gaarsiiyay raashiin gaaraya 11,100 oo tan, waxaana loogu tala galay in lagu caawiyo dadka kummanaanka kun ah ee ku barakacsan daafadaha iyo gudaha Magaalada Moqdisho.
Isbuucii aynu soo dhaafnay dalka Soomaaliya waxaa soo gaaray markab waday shexnad gar gaar ah oo dowlada turkiga u soo dirtay Soomaliya Ethiopia iyo Jabouti, kaasi oo bishii hore ka soo cambabaxay dekada Magaalada dhanka koonfureed Turkiga ku taala ee Mersin.
Turkiga ayaa sheegay inuu ka jawaabayay baaqii QM ee ahaa in Soomaliya lala soo gaaro gargaar bani’aadanimo.
Bishii hore QM ayaa sheegtay in in 5 milyeen oo Soomali ah oo dhigma 40% dadka Soomaaliyeed inaysan haysan raashiin ku filan.
Previous articleWasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya oo soo saartay jadwalka maamulka Hiir-Shabeele iyo isbahaysiga mucaaradka ee Soomaaliya ayaa soo saaray liiska xubnaha kor-joogtada uga noqonaya doorashada dalka.
Next articleTurkey delivered food aid to Somalia.